Ny torolàlana feno momba ny lalàna arbitration any UAE | Lalànan'ny Arbitration UAE
Ny torolàlana feno momba ny lalàna arbitration any UAE
Lalànan'ny Arbitration UAE
Ny fitomboana ara-toekarena tampoka an'ny UAE dia nametraka azy ho foibe ara-bola lehibe. Araka izany, nisarika ny sain'ny mpampiasa vola sy ny mpandraharaha iraisam-pirenena ny firenena. Mazava ho azy fa io dia niteraka ny famoronana andrim-panjakana samihafa.
Ary noho ny fitomboan'ny orinasam-barotra dia nanatri-maso ny fiakaran'ny fifanolanana ara-barotra ny Emira Arabo Mitambatra. Ireo fifandirana ireo dia nitombo kokoa noho ny fihemoran'ny toekarena manerantany. Ireo fihemorana ireo dia nahatonga ny orinasa tsy afaka namorona vola rehefa nilaina hanatanterahana ny fifanarahana nifanaovana tamina olona na orinasa hafa.
Noho ny fiakaran'ny disadisa dia nipoitra ny filàna rafitra famahana olana izay ara-potoana sy mandany vola. Noho izany ny fampiasan'ny maro ny arbitration.
Noho izany, nanjary fanao mahazatra ho an'ireo orinasa ara-barotra ao UAE ny fampidirana ireo andininy na fifanarahana arbitration amin'ny fifanarahana nifanaovan'izy ireo.
Andao hodinihintsika ny atao hoe arbitration alohan'ny hidirany amin'ny lalàna arbitration ara-barotra any UAE sy ny tombony azo.
Inona no atao hoe Arbitration?
fanelanelanana dia iray amin'ireo rafitra lehibe amin'ny famahana ny olana. Ny fomba hafa amin'ny famahana ny fifanolanana dia misy ny fifampiraharahana, fanelanelanana, lalàna fiaraha-miasa ary fitsarana.
Anisan'ireny fomba samihafa amin'ny famahana ny fifanolanana ireny, miavaka ny fanelanelanana. Izany dia noho ny fiasa mavitrika.
Ny iray amin'ireo singa voalohany amin'ny fanelanelanana dia ny orinasam-pandraharahana na ny olona afaka mamaha ny tsy fifanarahan'izy ireo nefa tsy mankany amin'ny fitsarana.
Ny fizotrany dia misy antoko roa mifidy antoko fahatelo tsy mitanila, antsoina ara-dalàna ny arbitrator, hijoro eo anelanelany isaky ny misy fifanolanana. Ny roa tonta dia miombon-kevitra mialoha fa ny didim-pitsarana navoakan'ny arbitratora dia maharitra sy mamatotra. Ity didim-pitsarana ity dia antsoina ara-dalàna ho loka.
Taorian'ny nifanarahan'ny roa tonta nifanaraka tamin'ny antsipirian'ny fizotran'ny arbitration, dia nandeha ny fihainoana. Nandritra io fihainoana io dia samy nanolotra ny porofo sy fijoroany ho vavolombelona hanamafy ny fitakiany ny roa tonta.
Aorian'izay, ny arbitrator dia mihevitra ny filazan'ny roa tonta mba hanome loka. Ity loka ity dia matetika farany, ary zara raha dinihin'ny fitsarana ny loka.
Ny fanelanelanana dia mety an-tsitrapo na voatery.
Araka ny mahazatra, ny fanelanelanana dia an-tsitrapo foana. Saingy rehefa mandeha ny fotoana, misy ny firenena sasany dia nanery azy io raha ny amin'ny famahana ny olana ara-dalàna sasany.
Topimaso momba ny lalàna Arbitration UAE
Ny lalànan'ny arbitration UAE dia samy manana ny mampiavaka azy, izay ahitana:
# 1. Ny rafitra mpanao lalàna
Ny lalàna arbitration UAE amin'ny ankapobeny dia afaka miasa amin'ny faritra samihafa amin'ny UAE ankoatry ny faritra malalaka ara-bola. Ireto faritra tsy andoavam-bola ireto dia fantatra amin'ny anarana hoe faritra fivarotana malalaka.
Izy ireo dia faritra ara-toekarena izay nananganana mpampiasa vola vahiny ny orinasany ary manao varotra. Ny faritra malalaka rehetra dia samy manana ny lalàna mifehy ny arbitration manokana mba hamporisihana sy hisarihana ireo mpampiasa vola vahiny.
Misy faritra fivarotana malalaka roa any UAE:
Ankoatra ireo faritra ireo dia mihatra amin'ny faritra hafa rehetra any UAE ny lalàna mifehy ny arbitration ankapobeny.
# 2. fetra
Araka ny lalànan'ny Federaly UAE, ny antoko dia afaka manohitra ny loka arbitration ao anatin'ny 15 taona raha fitakiana sivily izany ary ao anatin'ny 10 taona raha fitakiana ara-barotra izany. Rehefa tapitra ny fe-potoana voatondro, ny hetsika ara-dalàna rehetra mifandraika amin'ny loka arbitration dia voafetra ara-potoana ary tsy hatrehin'ny fitsarana.
Ankoatr'izay, ny lalàna dia manome fa ny loka farany dia tsy maintsy avoaka ao anatin'ny 6 volana, manomboka amin'ny datin'ny fihainoana voalohany.
Ny arbitrator dia afaka manitatra ny fihainoana amin'ny enim-bolana fanampiny na mihoatra arakaraka ireo antoko mifanipaka.
# 3. Validin'ny fifanarahana arbitration
Mba hampanan-kery ny fifanarahana arbitration dia tsy maintsy mahafeno fepetra takiana izy io, izay misy:
Ny arbitration dia tsy maintsy atao amin'ny endrika voasoratra. Mety misy resaka fifanakalozana hafatra an-tsoratra na elektronika izany.
Ilay olona manao sonia ny fifanekena nifanaovana tamin'ny anaran'ny andrim-panjakana dia tokony hanana fahefana hanao izany.
Raha misy olona voajanahary nanao sonia ny fifanarahana, io olona io dia tsy maintsy olona afaka manatanteraka ny adidiny ara-dalàna.
Ny orinasa iray dia afaka mampiasa ny fifanarahana arbitration an'ny iray hafa raha mbola nanondro ny andininy arbitration tafiditra izy ireo.
Ankoatr'izay, ny fanambarana ao amin'ny fifanarahana arbitration dia tsy maintsy amin'ny teny mazava. Ny roa tonta dia tsy maintsy mahatakatra tsara izay rehetra ao amin'ny fifanarahana arbitration.
# 4. mpizara
Ara-dalàna, tsy misy fetra ny isan'ny arbitrators mety amin'ny raharaha iray. Na izany aza, raha misy filàna arbitrator mihoatra ny iray, dia tsy maintsy ho isa hafahafa ny isan'ireo mpanelanelana.
Rehefa mifidy arbitrator dia misy torolàlana manokana momba ny lalàna:
Ny mpitsara arak'izay dia tokony ho antoko tsy miandany ary tsy zaza tsy ampy taona eo ambanin'ny lalàna.
Ny arbitrator dia tsy tokony iharan'ny fandrarana vokatry ny fatiantoka, heloka bevava, na asa hafa tsy ara-dalàna.
Ny arbitrator dia tsy tokony hiasa amin'ny iray amin'ireo roa manao sonia ny fifanarahana arbitration ny fifanarahana.
# 5. Fanendrena arbitrator
Ny ankolafy roa dia tompon'andraikitra amin'ny fanolorana ny arbitrators. Fa raha tsy afaka mahazo marimaritra iraisana ny roa tonta dia afaka miditra an-tsehatra ny andrim-pitsarana hanendry arbitrators mahay.
Aorian'izay dia manendry mpitarika iray amin'izy ireo ny mpitsara. Raha tsy afaka manendry mpitarika izy ireo dia ny andrim-panjakana arbitral no hanao ny fotoana.
# 6. Fahaleovan-tena sy tsy fizahan-tavan'olona arbitrator
Rehefa manendry arbitrator ny arbitrator dia tsy maintsy manome fanambarana an-tsoratra voasoratra ara-dalàna izay mamafa ny fisalasalana rehetra momba ny tsy fizahan-tavan'izy ireo. Raha misy tranga izay tsy ahafahan'ny arbitrator manohy mizaha tavan'olona amin'ny raharaham-pitsarana dia tsy maintsy mampandre ireo antoko izy ireo. Ary izany dia mety mitaky ny fametrahan'ny arbitrator ny toerany.
# 7. Fanesorana ny arbitrator
Ny zavatra sasany dia mety hitarika amin'ny fanesorana sy fanoloana ireo mpanelanelana, ao anatin'izany:
Ny fahafatesana na ny tsy fahafahan'ny arbitrator iray manatanteraka ny asany.
Ny fandavana hanao ny asany.
Mihetsika amin'ny fomba izay mitarika amin'ny fahatarana tsy azo hamarinina amin'ny fizotrany.
Fanatanterahana hetsika manitsakitsaka ny fifanarahana arbitration.
Tombontsoa azo avy amin'ny fisafidianana ny fifampiraharahana ara-barotra
# 1. Fahafahana misafidy olona mety hamaha ny disadisa
Ny roa tonta dia afaka misafidy arbitrator izay heverin'izy ireo fa mety amin'ny asa. Io dia ahafahan'ny roa tonta misafidy arbitrator izay mahatakatra tsara ny olana eo am-pelatanany.
Izy ireo koa dia manana fotoana hisafidianana olona manana traikefa ampy amin'ny famahana ny olana eo amin'ireo orinasa orinasa.
# 2. manovaova
Ny arbitration ara-barotra dia malefaka amin'ny fanomezana ny antoko fahafaha-mibaiko ny fizotran'ny fizotrany, ao anatin'izany ny ora sy toerana. Io dia ahafahan'ny roa tonta manao drafitra fifanarahana ahazoana aina amin'izy ireo.
# 3. Ara-potoana sy lafo vidy
Vokatry ny tsy fitovizan'ny arbitration ara-barotra, ireo antoko dia afaka manao ny fomba haingana.
Izany dia manampy amin'ny fitehirizana ny vola be laniana mandritra ny fotoam-pitsarana.
# 4. Fanapahan-kevitra farany
Ny fanapahan-kevitra farany noraisina tamin'ny arbitration dia mamatotra. Izany dia mahatonga ny fanamby ho an'ny ankolafy rehetra mba handefa antso rehefa tsy afa-po amin'ny valiny. Hafa noho ny raharaham-pitsarana izay misokatra ho an'ny antso amin'ny fitsarana tsy miova izany.
# 5. Fomba tsy miandany
Raha misy ny fifanolanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia afaka manapa-kevitra ny roa tonta hoe aiza no hanaovana ny fotoam-pitsarana. Azon'izy ireo atao ihany koa ny misafidy ny fiteny amin'ny fizotran'ny fizarana.
Manakarama mpisolovava mahay UAE
Amal Khamis Advocate sy consultants ara-dalàna dia orinasan-dalàna UAE miorina tsara izay ekena eran'izao tontolo izao. Izahay dia orinasan'ny lalàna mifehy ny arbitration any UAE. Ny ekipan'ny mpisolovava anay dia afaka manampy anao amin'ny famolavolana ny fifanarahana arbitration ara-barotra sy hitarika anao amin'ny fizotran'ny arbitration any UAE.
Manana traikefa 50 taona mahery izahay amin'ny fiatrehana olana ara-dalàna isan-karazany, indrindra eo amin'ny sehatry ny fifampiraharahana ara-barotra. Izahay dia orinasan-dalàna mifototra amin'ny mpanjifa izay miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay hamaly ny filany manokana. Ka ny tombontsoanao dia voaro tsara miaraka aminay amin'ny maha solontena anao.
Nanjary fomba iray malaza kokoa ny fifanarahana araraotina mba handaminana ny fifanolanana, indrindra eo amin'ny adilahy ara-barotra izay mety misy vola be. Na izany aza, tsy mahalala firy momba ny lalàna ny ankamaroan'ny olona, ​​ary izay fantany dia matetika tsy marina. Manana ny zavatra rehetra ilaina izahay amin'ny famahana sy famahana ny fifanolanana ara-barotra, na orinasa kely na lehibe ilay antoko. Manomeza tanana ho antsika anio ary andao isika hanao asa tena tsara amin'ny famahana am-pilaminana ity fifanolanana ity.